Ọrịa M Na-arịa Emeghị Ka Ike Gwụ M | Akụkọ Ndụ
ISIOKWU TETA! A Ihe Chineke Meere Gị
ISIOKWU TETA! A Ihe Ị Na-ekwesịghị Ikwe Ka Ọ Kwaa Gị
AKỤKỌ NDỤ Ọrịa M Na-arịa Emeghị Ka Ike Gwụ M
Chineke Ọ̀ Chọrọ Ka Ndị Si n’Okpukpe Dị Iche Iche Na-efekọ Ya Ọnụ?
Otú Okwu Chineke Si Ruo Ndị Mmadụ Aka na Spen n’Oge Ochie
Baịbụl Ò Kwuru Ka Anyị Na-agba Ista?
Ụlọ Nche | Mach 2014
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ọrịa M Na-arịa Emeghị Ka Ike Gwụ M
Akụkọ Maite Morlans kọrọ
Onye ọ bụla hụrụ m ebe m nọ n’oche ndị ngwọrọ agaghị ekweta na ume dị m n’ahụ́ n’ihi otú m si dị gịrịgịrị. N’agbanyeghị na ike na-agwụ m mgbe niile, o nwere ihe na-enye m ume. Ka m kọwaa otú ọrịa si kpaa m aka ọjọọ na ihe na-enyere m aka idi nsogbu m.
Mgbe m dị afọ anọ
Obi na-atọ m ụtọ mgbe ọ bụla m chetara oge m dị obere. N’oge ahụ, mụ na papa m na mama m bi n’obere ụlọ dị n’otu ime obodo dị na Frans. Papa m rụụrụ m janglova m na-anya, obi na-atọkwa m ụtọ ịgbagharị n’ubi dị n’ebe ahụ anyị bi. N’afọ 1966, Ndịàmà Jehova bịara n’ụlọ anyị, ha na papa m akpaa ezigbo nkata. Ọnwa asaa ha kpachara nkata ahụ, papa m kpebiri na ya ga-abụ Onyeàmà Jehova. N’oge na-adịghị anya, mama m kpebikwara ịbụ Onyeàmà Jehova. Ọ bụ n’ezinụlọ obi ụtọ a ka a zụlitere m.
Papa m na mama m bụ ndị Spen. Anyị mechakwara laghachi Spen. Obere oge anyị laghachiri, aka m na ụkwụ m malitere igbusi m mgbu ike. Anyị gara hụ ndị dọkịta dị iche iche ka a mara ma hà ga-agwọ m. Mgbe afọ abụọ gafere, anyị hụrụ otu dọkịta a ma ama. Dọkịta a gwara anyị hoo haa na a gaghịzi agwọtali ọrịa ahụ m na-arịa. Ozugbo mama m nụrụ ihe o kwuru, o bidoro ibe ákwá. Ihe m nọ na-anụ n’oge ahụ bụ okpookpo aha dị iche iche dọkịta ahụ kpọrọ ọrịa ahụ m na-arịa. N’agbanyeghị na aghọtachaghị m ihe o kwuru n’ihi na adị m naanị afọ iri mgbe ahụ, o doro m anya na ọ na-ekwu na ọrịa ahụ bụ ọrịa ọjọọ.
Dọkịta ahụ gwara papa m na mama m na ọ ga-aka mma ka ha kpọga m n’ebe a na-agwọ ụmụaka ndị rịaterela ọrịa aka. Mgbe anyị ruru ebe ahụ, ihe m hụrụ kụdara m obi. Iwu dị ebe ahụ karịrị akarị. Ndị sista nọ ebe ahụ kpụrụ m isi, yiwekwa m uwe na-amaghị mma. Anya mmiri juru m anya, mụ ajụwa onwe m ma m̀ ga-anọlikwa ebe a.
JEHOVA NYEERE M AKA
Ndị nọ ebe ahụ a kpọgara m na-ekpe Katọlik. Ma, ekweghị m eso ha n’ihi na papa m na mama m kụziiri m na ọ bụ Jehova ka m kwesịrị ife. O siiri ndị sista ahụ ike ịghọta ihe ndị m kọwaara ha mere na anaghị m eso ha eme ihe ndị ha na-eme. Arịọrọ m Jehova ka o nyere m aka. N’oge na-adịghị anya, ahụ́ dara m jụụ, ya adị m ka Jehova ọ̀ bịakwutere m jide m aka ka ihe ọ bụla ghara ime m.
Ọ bụ naanị n’ụbọchị Satọdee ka a na-ekwe ka papa m na mama m na-abịa eleta m. Ha bịawa, ha na-ewetara m akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl m ga na-agụ ka okwukwe m sie ike. A naghị ekwe ka ụmụaka ndị nọ ebe ahụ nwee akwụkwọ nke ha. Ma, ndị sista ahụ kwere ka m dowe akwụkwọ ndị ahụ, m na-agụkwa Baịbụl m kwa ụbọchị. Ana m agwakwa ụmụ agbọghọ ndị ọzọ nọ ebe ahụ na enwere m olileanya ịdị ndụ n’ụwa ruo mgbe ebighị ebi mgbe ụwa ga-aghọ paradaịs nakwa na o nweghị onye ga-arịa ọrịa n’oge ahụ. (Mkpughe 21:3, 4) N’agbanyeghị na e nwere mgbe obi na-ajọ m njọ, owu ana-amakwa m, obi dị m ụtọ na okwukwe m nwere na Jehova sikwuru ike.
Mgbe ọnwa isii gachara, ndị dọkịta nọ n’ebe ahụ hapụrụ m ka m laa. N’agbanyeghị na agbakebeghị m, obi dị m ụtọ na alọtala m n’ụlọ anyị. Ụkwụ na aka ahụ na-egbu m mgbu bịara kakwuo njọ. Mgbe m na-etopụta agbọghọ, ọrịa ahụ ekweghị m ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Ma, ekpebiri m na aga m eji ndụ m jeere Nna m nke eluigwe ozi otú ike kwere m. E mere m baptizim n’oge m dị afọ iri na anọ. Ma, e nwere oge ọ na-adị m ka Chineke ọ̀ gbakụtara m azụ. M na-agwa ya n’ekpere, sị: ‘Gịnị mere i ji kwe ka m na-ata ahụhụ niile a? Biko, gwọọ m. Ọ̀ bụ na ị naghị ahụ ahụhụ m na-ata?’
Ihe adịrịghị m mfe n’oge m na-eto eto. Ọ bịara doo m anya na agaghị m agbake n’ọrịa ahụ. Amalitere m iji onwe m atụnyere ndị enyi m ahụ́ gbasiri ike, ya emee ka m chewe na o nweghị uru m bara. M malitekwara ịnọrọ onwe m. N’agbanyeghị nsogbu niile a, papa m na mama m na ndị enyi m nyeere m aka. E nwere otu enyi m nwaanyị aha ya bụ Alicia. Mgbe ọ bụla m chetara ya, obi na-atọ m ezigbo ụtọ. O ji afọ iri abụọ tọọ m. O nyeere m aka ka m wepụtụ obi m n’ọrịa ahụ m na-arịa ma kpawa ndị ọzọ nso.
IHE NDỊ M MERE KA NDỤ TỌWA M ỤTỌ
Mgbe m dị afọ iri na asatọ, ọrịa ahụ nyesiri m nsogbu ike nke na mgbe ọ bụla m gara ọmụmụ ihe lọta, ahụ́ na-agwụ m. Ma, ana m eji ohere ọ bụla dapụtaara m amụ Baịbụl nke ọma. Akwụkwọ Job na akwụkwọ Abụ Ọma mere ka m ghọta na ọ bụghị oge niile ka Jehova na-eme ka ihe ọjọọ ghara ime anyị. Kama, ọ na-enyere anyị aka ka anyị die nsogbu ọ bụla bịaara anyị. Arịrịọ m na-arịọ Jehova mgbe niile mere ka m nwee “ike karịrị ike nkịtị” na “udo nke Chineke nke karịrị echiche niile.”—2 Ndị Kọrịnt 4:7; Ndị Filipaị 4:6, 7.
Mgbe m dị afọ iri abụọ na abụọ, amalitere m ịnọ n’oche ndị ngwọrọ. Ịnọ n’oche ahụ adịghị m mma n’ihi na echere m na ọ ga-eme ka ndị mmadụ chee na abụ m akpa ọrịa. Ma, oche ahụ mechaziri baara m uru n’ihi na o mere ka m nwee ike ịna-eme ihe ụfọdụ m na-anabughị eme. Enyi m nwaanyị aha ya bụ Isabel gwara m ka m gbalịa soro ya kwusaa ozi ọma ruo awa iri isii n’otu ọnwa.
Mgbe ọ gwara m ihe a, echere m na ọ gaghị ekwe omume. Ma, arịọrọ m Jehova ka o nyere m aka. Ndị enyi m na ndị ezinụlọ m nyekwaara m aka ka m nwee ike ime ya. Mgbe m na-ama ihe na-emenụ, ọnwa ahụ agwụla, ụjọ ahụ na-atụ m na ihere ahụ na-eme m kwụsịkwara. Ozi ọma ahụ m kwusara tọrọ m ezigbo ụtọ. N’ihi ya, n’afọ 1996, ekpebiri m ikwusa ozi ọma oge niile. Ihe ọ pụtara bụ na m ga na-ezi ozi ọma awa iri itoolu kwa ọnwa. Obi dị m ụtọ na ekpebiri m ime otú ahụ. O meela ka m bịaruo Chineke nso, meekwa ka ahụ́ na-agbasitụ m ike. Ikwusa ozi ọma emeela ka m na-akọrọ ọtụtụ ndị ihe m kweere, meekwa ka m nyere ụfọdụ ndị aka ka ha na Chineke dịrị ná mma.
JEHOVA AHAPỤBEGHỊ M
N’afọ 2001, ụkwụ m abụọ gbajiri n’oge m nwere ihe mberede okporo ụzọ. Ka m dina n’ụlọ ọgwụ, ahụ́ niile ana-afụ m ezigbo ụfụ, ekpere m ekpere n’obi m, sị: “Jehova, biko, ahapụla m.” Otu nwaanyị nọ n’akụkụ m jụrụ m, sị, “Ị̀ bụ Onyeàmà Jehova?” Ebe ọ bụ na ike ikwu okwu adịghị m, ekwere m n’isi. Nwaanyị ahụ kwuziri, sị: “Ama m unu nke ọma. Ana m agụkarị magazin unu.” Ihe ahụ o kwuru kasiri m obi. Obi tọrọ m ụtọ na m ziri mmadụ ozi ọma n’agbanyeghị na ahụ́ gwụrụ m agwụ.
Mgbe ahụ́ dịtụwara m mma, amalitere m izi ndị ọzọ nọ n’ụlọ ọgwụ ahụ ozi ọma n’agbanyeghị na m ka bu bandeeji n’ụkwụ. Kwa ụbọchị, mama m na-akwara m n’oche ndị ngwọrọ m aga eleta ndị ọzọ ahụ́ na-adịghị ka anyị mara otú ha mere. Anyị kelechaa ha, anyị na-enye ha akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl ha ga-agụ. Ike na-agwụ m ma anyị gagharịchaa, ma Jehova na-enye m ume.
Mụ na papa m na mama m n’afọ 2003
Kemgbe afọ ole na ole gara aga, ahụ́ na-egbu m mgbu karịa otú ọ na-egbubu m. Ọnwụ papa m kpakwara m aka ọjọọ. Ma, ana m agbalị ka m na-enwe obi ụtọ. Ihe na-enyere m aka bụ na m na-akpa ndị enyi m na ndị ikwu m nso. Mgbe ọ bụla mụ na ha nọ, m na-echefu nsogbu m. Ma, ọ bụrụ na o nweghị onye mụ na ya nọ, ihe m na-eme bụ ịgụ akwụkwọ ma ọ bụ ịmụ Baịbụl ma ọ bụkwanụ mụ ejiri fon na-ezi ndị mmadụ ozi ọma.
Ihe m na-echetakarị bụ otú ihe ga-adị ma ụwa ghọọ paradaịs otú Chineke kwere ná nkwa
Ana m agbalịkwa ka ụmụ obere ihe ndị mmadụ na-ejighị akpọrọ ihe na-eme m obi ụtọ. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ikuku ekusa m n’ihu ma ọ bụ mụ anụ ísì okooko osisi, obi na-atọ m ụtọ, mụ ekelee Chineke. Achọpụtakwara m na ime ihe ga-atọ ndị ọzọ ọchị na-enyere m aka. E nwere ihe mere otu ụbọchị mgbe enyi m kwa m n’oche ndị ngwọrọ na-aga ozi ọma. Ka anyị na-aga, ọ hapụrụ m ka o dee ihe n’akwụkwọ. Tupu anyị amata ihe na-emenụ, oche m ahụ eburula m gaa kụọ n’ụgbọala a dọwara otu ebe. Ihe ahụ merenụ juru anyị anya. Ma, mgbe anyị chọpụtara na o nweghị oké ihe mebirinụ, anyị dapụrụ n’ọchị.
E nwere ọtụtụ ihe m na-enweghị ike ime ugbu a, anaghịkwa m echegbu onwe m maka ha n’ihi na ha so n’ihe ndị m ga-eme n’ọdịnihu. Ihe m na-echetakarị bụ otú ihe ga-adị ma ụwa ghọọ paradaịs otú Chineke kwere ná nkwa. (2 Pita 3:13) Ihe na-agbata m n’obi bụ otú m ga-adị mgbe ahụ́ ga-agbasi m ike, mụ ejiri ụkwụ m abụọ na-awụgharị ma na-enwe obi ụtọ. Anaghị m eji ihe Eze Devid kwuru egwuri egwu. Ọ sịrị: “Nwee olileanya n’ebe Jehova nọ; nwee obi ike, ka obi siekwa gị ike.” (Abụ Ọma 27:14) N’agbanyeghị na ahụ́ m akala njọ ugbu a, Jehova ka na-enye m ike. Ọ na-eme ka ike ghara ịgwụ m.
Mach 2014 | Ihe Chineke Meere Gị
ỤLỌ NCHE Mach 2014 | Ihe Chineke Meere Gị